“Bulshooy adigay bokhraday” – Garanuug
Home / Waxqoris / Sirta Qoraalka / “Bulshooy adigay bokhraday”
Muxammad Yuusuf March 20, 2017	Sirta Qoraalka, Waxqoris Leave a comment 5,810 Views
Sirta Qoraalka: Masuuliyadda Qoraaga Soomaaliyeed
Qoraagu waxa uu isu xilsaaray in uu hal-abuur iyo gadhwadeen u noqdo nimcada qoraalka ee Alle innagu galladaystay. Waxaa saaran masuuliyad iyo ammaano ay waajib tahay in uu hagar la’aan u guto; taas oo ah kaydinta, kobcinta, dhawrista, iyo faafinta aqoonta iyo garashada ummadi leedahay.
Aqoonyahanka iyo hal-abuurku waa haldoorka ummadda hore u kiciya, una ifiya jidka. Waxaa xil ka saaran yahay sidii uu ugu horkici lahaa wixii dheefteedu ku jirto, una baal marin lahaa wixii dhibaato u keenaya. Si ay taasi ugu suuragasho, waxaa lamahuraan ah in uu xambaarsan yahay aqoon diimeed iyo mid adduunyaba. Waa in uu dhaqankii iyo sooyaalkii ummaddiisa garanayo, dhawrana baadisooca dadkiisa. “Waxa beddela umamku waa aqoonyahanka. Laakiinse waa marka aqoonyahanka kaydkiisa aqooneed[…] saxan yahay, waa in aanu weel wax lagu shubay ahayn e [caqli] wax naqdin kara waa in uu yahay. Haddii aqoonyahanku ahaan lahaa weel wax lagu shubay, haan la buuxiyay, dee CD-yada iyo DVD-yada ayaa aqoonyahan noqon lahaa saw ma aha?!”, ayaa uu yidhi Sheekh Mustafe X. Ismaaciil mar uu jeedinayey maxaadiro cinwaankeedu ahaa ‘Waa Kuma Aqoonyahan?‘. Aqoontu iska raro ma aha ee waa in la buunshobixiyaa oo wixii dheef leh la dhoweystaa, inta kalena qashinka lagu daraa. Qofku aqoonta uu bartaa waa in ay wax u kordhisaa, qofnimadiisa iyo garaadkiisana ay kobcisaa.
Wanaagga in la isfaro oo ummadda samaha lagu hagaa waxa ay keenaysaa in xumaantii laga daadiyo. Dadkeenna maanta dhibta haysataa cidna kama qarsoona haddii aan la iska indho tiraynin: Qabyaalad, eex, caddaaladdarro, dhaqan baaba’, nidaam xumo, fawdo, waxqabshasho la’aan, danaysi gaar ah, boob, gumeysi shisheeye, xisaabtan la’aan, waxgarad garaadkii gudhay,… Waa halkii uu Xaaji Aadan Afqallooc lahaa,
Wax na diley Iblays fooxle yidhi awliyaan tahaye
Xaaji Aadan Afqallooc: Wax Na Diley
Maansadan Xaaji Aadan waxa ay ku beegnayd 1967’dii, laakiin maanta in la tiriyey ayaa la moodaa. Sababtuna waxa weeyaan in aan wax badani iska keen beddelin ilaa xilligaa. Horumarkiiba waxa aynu u qaadannay adeegasho iyo agab kala jaad ah oo guryaha lagu sharraxdo, ama jeebka lagu sito. Dhaqan ahaan iyo dadnimo ahaanba in badan ayaa aynu hoos uga sii dhacnay halkaas uu Xaajigu tilmaamay. “Alle ku doori” mar baa ay duco noqotaaye, bulshadeennu doorin khayr qabta ayaa ay u baahan tahay. Waxa ay u baahan tahay in mar labaad, sidii haan gunta laga soo unko. Waxa ay u baahan tahay in aan korka laga dhayin e, maasha la saro, hurgumooyinka bulshadeenna ku raageyna laga daweeyo. Waa in la hirgeliyaa isbeddel bulsheed oo gun iyo baar ah si aynu ula ambaqaadno asaaggeen, oo aynu belaayada, baaska, iyo baryootanka uga baxno.
Alle ma dooriyo xaalada dad ku sugan yihiin ilaa ay nafahooda wax ka beddelaan.
Masuuliyadda aqoonyahanku waa in uu dhaliyaa isbeddelkan, oo uu bulsho cusub gunta ka soo dhisaa. Waa in uu beddelaa dhaqanka, fekerka, iyo maanhagga bulshada, kuna rakibaa nidaam jihayn cusub. Haseyeeshee, aqoon kasta oo uu xambaarsan yahay, iyo awood kasta oo u leeyahay kala hufiddeedda iyo kala haadinteeda, guul badan ma gaadhi karo haddii uusan lahayn awooddii iyo kartidii uu ku gudbin lahaa, sidaas awgeedna ma horseedi karo isbeddelkii loo baahnaa. Hagitaanka bulshadu waxa uu u baahan yahay in aqoonyahanku la yimaaddo hal-abuurkii uu ku fulin lahaa, kaas oo suuragelinaya samaynta “…aragtida guud ee bulshadu rumaysan tahay,” sida uu Sheekh Mustafe ku tilmaamay maxaadiradiisa.
Jaamac Kediye: Masaawaad
Waa in aan adiga oo hurdo dheer ku jira lagu gilgilin ee aad heegan ahaatid, Marka dadku hurdaan, waa in aad wax saadaalin iyo sahamin ku maqnaatid. Meel fog in aad wax ka aragto ayaa lamahuraan ah, oo aad guryasamo reerka u soo sahamisaa iyaga oo aan geeddiba weli ku fekerin. Ma aha in dabada lagaa riixo, oo aadan col iyo abaar toonna wax u haynnin sidii lax dhukan. Booskaa waxaa buuxiyey “waxgaradka” hadda innoo jooga ee aan waxba la soconnin, soona baraaruga goor xeedho iyo fandhaal kala dhaceen. U fiirso dardaarankii Sayid Maxamed iyo waxa maanta taagan.
“Nin ragay dardaaran u tahaye, doqon ha moogaado
Marka xiga dushuu idinka rari, sida dameeraaye“
Sayid Maxamed: Dardaaran
Hal-abuurku geesinimo iyo dhiirranaan, iyo dhabar-adayg ayaa uu u baahan yahay. Tusaale waxaa kuugu filan ragga aan murtidooda halkan ku soo qaatay iyo sooyaalkoodi. Laakiin geesinnimadu ma aha in aad haadaan iska tuurto, ee waa in aadan ka leexannin xaqii iyo runtii aad u halgamaysay. Bulsho hoggaaminteed iyo beddeliddeedu ma aha wax fudud, oo Soomaalidu hore ayaa ay u tidhi, “Canaan ka yaab reer ma doojo.” Aqoonta aad xambaarsan tahay iyo halganka aad ku jirtaa waa dhaxalkii Nebiyada, iyaguna wixii ay soo mareen waa aad ka war haysaa.
Xaaji Aadan: Wax Na Diley
Sidan oo kale ayaa Sheekh Mustafena leeyahay, “Hadduu aqoonyahanku noqon karo qof la bajin karo; oo ama suldada jirtaa bajin karto, baqo gelin karto, [dhaqan]ka bulshadu leedahay ee xun… uu ku baqo gelin karo, aqoonyahan ma aha. Ama aqoonyahanka aan rabney ee wax beddelayay ma aha.”
Waa in aad samir iyo dulqaad u yeelato gudashada waajibkaaga, ee maalinta ay kululaato aadan qalinka tuurin, ama dhanka kale ka soo jeesannin. Hal-abuurku “Sidii Nebi Ayyuub waa inuu samir adkaadaaye,” ayaa uu yidhi Jaamac Kediye.
Qoraa ahaan, hal-abuurkaagu waa in uu yool leeyahay, mabda’na ku dhisan yahay. Waa in aad nadiif tahay oo wanaagga aad dadka ugu yeedhaysaa uu kaaga muuqdo. Ma aha in labo isdiiddan midna lagaa maqlo midna lagaa arko. Ma aha in aad noqotid “iidheh” lagu shubto. Abwaan Gaarriye ayaa mar uu hordhac u samaynayey maansadiisa Uurkubaalle, waxa uu tilmaamayaa ahmiyadda ay leedahay in shakhsiyadda hal-abuurku nadiif ahaato, isaga oo taas sababaynayana waxa uu yidhi, “[maansayahanka] waxaa lagu qiimeeyaa shakhsiyaddiisa.” Haddii aad wax iska walaaqanayso cidina warkaaga qadarin mayso, tixgelin badanna siin mayso. Gaarriye waxa uu ku sii daray, “Haddaad doonayso inaad noqoto maansayahan, … maansayahaynkii DADKA, waa inaad adigu karaamo yeelataa, shakhsiyaddaadu waa inay karaamo yeelataa.” Karaamadaasina waxa ay ka dhalanaysaa, sida abwaanku tilmaamay, “…in wax la iigu soo hagaago; meel la iigu soo hagaagoo qofku maansadayda ugu soo hagaago waa in uu helo.”
Jaamac Kediye: Aftahan
Haddii aad gabbaldaye noqoto oo aad hadba dhanka cadceeddu kaa jirto u wareegto, waa dhibaato. Maalinba jihada dabayshu u dhacayso yaan lagaa heline, waa in aad xididdo gundheer ku qotontaa. Ha ku guulwadayn hal-abuurkaaga, ee ku dedaal in aad xaqa iyo runta garabtaagnaatid, kuna taagnoow hadh iyo habeen. “Xaq baa lagu bacrimiyaa” hal-abuurka e, la jiifiyaana bannaan waa uu ku hagaasaa. Sida Jaamac Kediye tilmaamayo, hal-abuurku “Xaqqa waa inuu ku adimaa oo arrimiyaaye [Kediye, aftahan]”, ee uusan eex iyo iin toona ka shaqaynin. “Umaddiisa waa inuu sinnaan ugu adeegaaye [Kediye, aftahan]” ee uusan noqonnin fiqi tolkii kama janna tago. Saxafiga dadka marin habaabiya ee ciddii uu maalintaa taageersan yahay, ama biilkiisa bixisa, ama beesha uu ka tirsan yahay, dhankeeda u janjeedhaa waa uu qaayo beelayaa, qadarin iyo qiimana yeelan maayo. Kuwaa uu u xaglinayo ayaa maalinta ay ku sannifaan tuuraya, cid kalena awalba naxariis uma haynin. Sidaas awgeed, “Waa inuu ikhyaar daacada oo jira ahaadaayee [Kediye, aftahan]”, “In kastaan kolley Aadanaha iimood laga waayin; insaaninimo waa inuu ku ismanaadaaye [Kediye, aftahan]”.
Ummad baa ku sugeysa, farriin baad siddaa e, hungurigu yuusan kaa xumaan. Waa in aad aqoontaada iyo aragtidaada xor u tahay.
Qoraalkaagu yuusan la qiimo noqon qamadi qorraxda taalla oo qofkii qadaadiic bixiya daasad loogu qaado. Yaysan kaa noqon “maxaan malmaluuqaa oo aan shilimaad ka helaa” ee noqo qof bulshada u boqran/ bokhran oo baahideedu ay dhaqaajiso dareenkiisa. Si fiican u dhugo murtida abwaannadan:
Jaamac Kadiye: Masaawaad.
Sheekh Mustafe oo isna arritan tilmaamayey waxa uu yidhi, “Aqoonyahanku hadduu caloosha aqoonta ka hormariyo, aqoonyahan ma aha. ‘Maxaan cunaa’ haddaad u noolaato. Hadday noqoto ‘aqoontaydu maxay goysaa; suuqa maxaan ka gooyaa?’. Haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin e, waxa ay qiimaynaysaa uu noqdo ‘sidee lacag lagu helaa?, wallow badda ku dhacnee?’ –qiimo ma leh markaa… Aqoonyahanku haddii uu noqdo qof la iibsan karo; suldadu iibsan karto, dawladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan, aqoonyahan ma aha. Hadduu aqoonyahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo; toban oday intay kuu yimaaddaan ku yidhaahdaan ‘reerku saasuu damcay’, waa lagu iibsaday.”
Soomaali haddii aynu nahay, maanta xaaladdeennu meel xun baa ay maraysaa. Haddadaa aynu joogno waa taa abaarta iyo gaajada ay dadkeennii u le’enayaan. Xoolihii hadalkoodiiba dhaaf. Tiro ma leh abaaraha inna soo maray, waxa keli ah ee aynu kala hadhnaana waa magac. Garaad iyo garasho kama kororsanno. Sida ummushu xanuunka foosha u illowdo, baa aynu baaba’ii abaarta u illownaa marka roob yari da’o, meelna waxba ma dhiganno. Biyihii aynu la’aantood u dhimanaynay, iyaga oo horteenna qulqulaya ayaa aynu daawannaa, mase garanno kaydsada. Hal-abuurkii Soomaaliyeed kaalintiisi meeday? Weli ma la hayaa hal buug oo masiibadan iyo xal u raadinteeda laga qoray? Imisa maqaal oo macna leh baa saxaafaddeenna ku soo baxay? Dadka ma la baray sidii ay dhibta abaarta uga hortegi lahaayeen? Wacyigelintii meeday? Roobka Allaa hayee, marka cirku awdmo in aynaan gaajo u dhammaan xal ma loo raadiyey?
Meeday kaalintii uu hal-abuurku ku lahaa waxbarashadeennan baaba’a taagan? Boqollaal “aqoonyahan” oo inta adduun shahaado taalla xambaarsan baa innoo jooga e, maxaa innagu kallifay in aynu tobannaan manhaj dugsiyeed sidii bariis la soo degno? Ma dow baa in waxgaradkeennii oo makhaayadaha fadhi-ku-dirir la fadhiya ilmaheenni la baro Nakuru, Najraan, iyo Niilka Masar iyo Xabashi isku haystaan, isaga oo aan dalkiisii waxba ka aqoonnin? Goorma ayaa aynu ka baxaynaa tiihan?
Bulshada Soomaaliyeed waa ay mudducaysaa. Haldoorkeedii iyo hal-abuurkeedii baa hagraday. Waxa ay rabtaa hal-abuur waxa ka daahsoona u iftiimiya. Waxa ay rabtaa haldoor u halgama xaqeeda, halaqana ka dhawra. Waxa ay rabtaa afhayeen u hadla.
“Innaga waxa ina baylihiyay aqoonyahankaynnu daba soconnay. Aqoonyahankeennii meel cidlo ah buu ina dhigay. Ka soomaali ahaan, waxa ina qaybiyay, ina burburiyay, xadkaa ina gaadhsiiyay, waa aqoonyahankeennii. Waayo aqoontuu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysay. Aqoon ku xoogsi ah uun bay noqotay ka ugu fiicani, isagu ku xoogsado oo uu wax ku korodhsado, laakiin dalkiyo bulshada aan midna waxtar u lahayn. Aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo Rabbigeedna rumaysan aakhrideedana ka fekeraysa, adduunkeedana dhisaysa ayaynnu u baahannahay.” ayaa uu yidhi Sheekh Mustafe.
“Marka beladu sooyaanto
Sambabkuba col weeyaane
Marka saymo loo iisho
Ama soofku jaanqaado
Ushu way sabooshaaye,
Ha ku dagan sidsidadkeeda
Weliga a ha sii deynin
Samo iyo ku dloon heedhe
Ku rnidee samuud raaca
Jaamac Kediye, Youtube.
af-soomaali sirta qoraalka talobixin taxane waxqoris	2017-03-20
Previous Mamuu iyo Seyn 15: Kacdoon iyo Dhagar
Next Daraawiishta: Milicsi Taariikheed
March 30, 2017	121,050
July 24, 2016	31,295